Orthodox Christian Initiative for Africa: Chechi Orthodox: Chechi yekare, rakatangwa naJesu Kristu - ivo Chechi egondo, ivo Chechi kwevatsvene
Chechi Orthodox ndiye Chechi yekare, rakatangwa naJesu Kristu makore 2000 akapfuura.
Kubva pakutanga kwayo kusvikira nhasi, Chechi yeOrthodox ane zviuru zvavaitenda, vapristi vatsvene uye Pakauya mabhishopi, mamongi, mamishinari uye vanhu vakanga vakapa zvose kubatsira vamwe vavo. Mizhinji yevatsvene izvi vari Africa. Nhasi, muAfrica, mamishinari Orthodox rambai basa iri. Vamwe vavo vari vatsvene. Africans vazhinji vasande vechiKristu Orthodox. Vanorarama pasi chiedza chaMwari, muchiedza Jesu Kristu.
Chechi Orthodox yakasiyana zvachose kubva Vatican Chechi, Mapurotesitenzi nePentecosti, nekuti ichi ndicho chiKristu rokutanga. Izvi vanobvuma zviuru vechechi yeRoma, Mapurotesitenzi nePentecosti munyika dzakawanda, izvo ikozvino zviri vaKristu Orthodox.
Ndinokurudzira hama dzangu pa Zimbabwe, pa Mozambique, pa Botswana, pa Zambia, Chamhembe Afrika nomunyika Afrika, kuziva yeOrthodox Chechi. Ziva vatsvene. Kuti vave nokubatana pamwe muviri neropa raJesu Kristu. Nhunzi samakondo kuti umambo hwokudenga.
Jesu Kristu, Mwanakomana waMwari, akava munhu, nokuti munhu ave mwanakomana waMwari.
Nyaya ino rakanyorwa muchiGiriki uye rakashandurwa otomatiki. Ungatofanira zvimwe zvikanganiso rokushandura.
Kana muchida, verenga magwaro anotevera:
Orthodox Mozambique A Igreja Ortodoxa em Moçambique - A Santa Diocese de Moçambique
Ετικέτες Botswana, Chechi Orthodox, Mozambique, Orthodox Botswana, Orthodox Mozambique, Orthodox South Africa, Orthodox Zambia, Orthodox Zimbabwe, Shona, South Africa, Zambia, Zimbabwe